Su'aalaha la Weydiiyo - Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Waa maxay nooca qalabka magnetka ee aan ka heli karno Meiko Magnetics?
Meiko Magneticswaa soo saare xirfadle ah oo horseed u ah soo-saareyaasha magnetka & dhoofinta Shiinaha. Wax soo saarkeenu wuxuu u dhexeeyaa magnad neodymium bared ilaa shirar la xiriira magnetic qaabab kala duwan, shaqooyin iyo codsiyo. In kabadan 2000 nooc walxaha magnetka ayaa ikhtiyaari ah.
Sidee ku saabsan tayada magnetkaaga?
Waxaan ku dadaalnaa inaanu soo bandhigno alaabooyin magnet oo tayo sare leh WALIGIIN SANAD, marka laga reebo waxyeello kasta oo macmal ah iyo xaalad sii xumaanaysa. Waxaan damaanad qaadeynaa agabkeena iyo shaqadeena. Balanteenu waa qanacsanaantaada waxyaabahayaga birlabta. Dammaanad ama maya, waa dhaqanka shirkadeena inay wax ka qabato oo ay xalliso dhammaan arrimaha macaamiisha si qof walba ugu qanco.
Qiimaheena waa isbadali karaan iyadoo kuxiran sahayda iyo sababaha kale ee suuqa. Laakiin maadaama aan asal ahaan ka soo jeednay alaabooyinka magnetic manfacturer ee fadhigoodu yahay Shiinaha, waxaan ku siin karnaa qiimo qurux badan oo tartan ah oo lagu badbaadinayo qiimahaaga.
Haa, waxaan ubaahanahay dhamaan amarrada caalamiga ah inay lahaadaan tirada dalabka ugu yar ee socda. Laakiin haddii walxaha cabbirka caadiga ahi keyd yahay, ma jiro MOQ amarro bilow ah. Faahfaahin dheeraad ah, fadlan naga caawi inaad nala soo xiriirto.
Haa, waxaan ku bixin karnaa dukumiintiyada badankood oo ay ku jiraan Warbixinta Imtixaanka, Shahaadooyinka Falanqaynta / Waxqabadka, Caymiska, Asalka, iyo dukumiintiyada kale ee dhoofinta loo baahan yahay.
Caadi ahaan 7-15 maalmood oo rar ah. Hadday yihiin waxyaabaha caadiga ah, waxaan ku geyn karnaa 3 maalmood. Shaybaarada cusub, waqtiga hogaamintu waa ilaa 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan markii (1) aan helnay deebaajigaagii, iyo (2) aan helno ogolaanshahaagii ugu dambeeyay ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan la shaqeynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaan la jaanqaadno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.